Nala soo xiriir - Shirkadda XinLan
Hal qayb oo ka mid ah XINLAN Gearboxes Co., Ltd.
Sida mid ka mid ah soo saarayaasha hogaaminaya, kuwa wax keena iyo kuwa wax dhoofinaya ee dixiriga dixiriga ah, marsho meeraha loo yaqaan 'gearbox', qalabka loo yaqaan 'gear', qalabka loo yaqaan 'cycloidal gearbox' iyo kuwa kale oo badan oo xawaaraha qalabka hoos u dhiga. Waxaan sidoo kale bixinnaa matoor habeysan, matoor koronto, mishiin isku dhafan, mootooyin howleed iyo matoorro cabbir kale leh.
wixii codsi ah, fadlan nala soo xiriir:
Cinwaanka: Ste B, Golden, Colorado, US.
Soo-saaraha dixiriga dixiriga ah ee xirfadlaha ah, hoos-u-dhigaha meeraha meeraha, hoos-u-dhigga qalabka wax lagu qoro, soo-saareyaasha cyclo, dc motor, soo saaraha gawaarida gawaarida iyo alaab-qeybiyeyaasha.
Cusboonaysiinta ugu dambeysay
AWOODDA XINLAN 2020